Sida loo Beddelaan Video_TS in AVI on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan Video_TS in AVI ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
Waxaa laga yaabaa inaad aad u badan ayaa ka mid ah cajallado fiidyow ah ee qaab file TS iyo sida caadiga ah, faylasha TS uma lihin Kan sameeyey Windows Movie ama ciyaaryahan warbaahinta la qaadi karo. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel TS aad files on Windows Movie Kan sameeyey ama u daawado on go ah qalabka la qaadi karo, waxaad u baahan doontaa in loogu badalo files si ay qaab file AVI ah.
Tan iyo markii uu qaab file TS ah caadi ahaan laga helo DVDs, xalka ugu fiican ee aad leedahay noqon lahayd in iyaga loogu badalo adigoo isticmaalaya DVD Converter ah. Wondershare Video Converter Ultimate Ayaa laga yaabaa in mid ka mid ah in aad la raadinaya kaliya.
Qeybta 1: TS Best in AVI Video Converter
Qeybta 2: Free TS in AVI Converter
Qeybta 3: TS Online in AVI Converter
Qeybta 4: Extended Knowlege u TS iyo AVI
Taageer tiro balaadhan oo ah diinta file DVD ee sida VOB, DivX, AVI, MPEG iyo iwm
Diinta Unsurpassed dardar 30 jeer.
Waxaa la dhisay-in editor ujeedooyin tafatirka.
Download online videos ka dibna gubi DVD-gaar ah.
Sida loo badalo TS ah in AVI
Video Converter Ultimate Ayaa sidoo kale socon u download iyo rakibidda on Windows 8 iyo muuqaalada waa isku mid haddii aad si ay u isticmaalaan Mac ee version. Fadlan raac tutorial hoose si loogu badalo TS aad files si AVI ah.
1. Ku dar files TS gal barnaamijka
Waxaad si fudud u jiidi-iyo-tagi karaan faylasha video toos ah Converter ama guji DVD Load> DVD Load Folder inay geliyaan video TS ee files. Video Converter Ultimate Ayaa sidoo kale taageertaa diinta Dufcaddii, si aad u gali kartaa faylasha sida ugu badan aad rabto.
Fiiro gaar ah : Haddii files TS waxaa lagu keydiyaa DVD ah, fadlan la falgali u Gubashada tab 's ka dib markii ay barnaamijka. Haddii ay ku wadid adag ama buugga aad PC-hoose, kaliya joog badalo tab 's.
2. Dooro AVI ama dadka kale wax soo saarka qaab aad
Riix Qaabka Output si aad u eegto qaabab taageero liiska hoos-hoos u. Waxaad ka heli doontaa AVI ee Qaabka > Video subcategory ama Device u diinta si toos ah aad doorato qalabka la qaadi karo, waayo, loo maqli karo.
3. Ikhtiyaar (dhisay-in editor)
Waxaa jira ah Edit button laga heli karaa mid kasta oo ka mid ah TS ku soo gudbin aad uploaded oo kaliya haddii aad u jeclaan doonaa si xaalkaa ku jira sida goobaha qaar goo, warqadda watermark, substitles ama codsan saamaynta gaar ah.
4. badalo iyo horumarka view
Ka dib markii ay wax walba oo la sameeyo, riix badalo button si loogu badalo TS aad videl files in qaabka wax soo saarka la doortay. Xawaaraha diinta waxay ku xiran tahay asalka video baaxadda iyo qaabeynta PC, laakiin waxaad yeelan doontaa in ay aragto horumarka sida ku cad shaashadda hoose.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo TS ay u AVI Video Converter for Windows
# 1. Free Video Converter: Wondershare TS Free in AVI Converter
Waxaad weli ka soo dejisan kartaa jecel aad video clips ka goobood oo online oo caan ah, iyo edit iyaga loogu badalo in ay ka qaabab file badanaa loo isticmaalaa offline helaan.
Pro: Dhamaan lacag la'aan ah.
1. Xawaaraha caadiga ah ee diinta.
2. Doorasho xaddidan oo ah qaabab wax soo saarka.
Qeybta 4: Extended Aqoonta TS iyo AVI Qaabka
TS waa daad gaadiidka (sidoo kale weel warbaahinta a) loo isticmaalaa in uu kaydiyo video, audio iyo xogta in uu ku jira qaab faylka MPEG-2. AVI waa weel multimedia ay ku jiraan xogta audio iyo video labadaba. Waxa ay u ogolaataa audio-la-video loo maqli synchronous. Files AVI taageeraan badan audio geeyo iyo video
Video / MP2T Video
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file TS ah
Sida loo Beddelaan AVI in VOB Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan qaab file AVI ah
Sida loo Beddelaan Video_MXF in AVI